शंकर लामिछानेका १० कुरा : शून्यवाददेखि साहित्यमा यौनसम्म
असोज २७, २०७४| प्रकाशित १५:५०
'प्रयोगशीलता नै शंकर लामिछानेको विशेषता हो' र शंकर लामिछानेको शैलीमा लेखक र पाठकसँगै बसेर कुरा गरिरहे झैं लाग्छ र प्रभावोत्पादकले गर्दा नेपाली गद्यशैलीले फर्मायसी लुगा लाए झैं लाग्छ भन्ने उद्‌गारले उनको नेपाली साहित्यमा भएको विशेषताको केही झलक पाइन्छ । तर, शंकर भने 'मैले आफूलाई लेखक कहिल्यै ठानिनँ र परिस्थितिले मलाई लेखक बनाइदियो, (भाग्यको विडम्बना भनेको यही हे क्यारे !) लेखक बन्ने साहस मैले कहिल्यै गर्न सकिनँ । कारण लेखक मेरो नजरमा देवता हो, देवकोटा हो । म त सिर्फ सोखको साधन, एउटा इच्छापूर्ति मात्र गरिरहेको थिएँ । (यो अर्कै कुरा हो, पाठकले मेरो ठट्टालाई साँच्चिकै मानिदियो ।)' भन्दछन्।
साहित्यलाई व्यवयाय नबनाउने शंकरको उद्देश्य र धारणाअनुरुप उनी यसमा सचेष्ट रहे तर २०२५/२६ सालतिर आएर उनको यो धारणा अर्थात् नेपालको आजसम्मको इतिहासमा साहित्य कहिल्यै व्यवसाय हुन सकेन । (चाकडी भएको कुरा छाडिदिनोस् !) तसर्थ मैले यसलाई सोखकै रूपमा अपनाएको छु भन्ने दृढोक्ति ढलपलायो । तर, उनले साहित्यलाई व्यवसाय बनाएर उत्पादन गरेको भए पनि 'गोधूलि संसार' निबन्धसंग्रह र अन्य फुटकर निबन्धहरू उल्लेखनीय रूपमा छन् र नेपाली निबन्धका विशिष्ट रूपमा छन् । 'एब्सट्र्याक्ट चिन्तन प्याज' निबन्धसंग्रहमा मदन पुरस्कार प्राप्‍त गर्न सफल हुने शंकर लामिछाने नेपाली साहित्यको निबन्ध विधाका साँच्चिकै सशक्त र प्रखर हस्ताक्षरका प्रतिभा थिए।
शंकर लामिछाने आफ्ना समकालीन साहित्यकार-निबन्धकारहरूमध्ये नितान्त अलग र विशिष्ट हुनुमा उनको आफ्नोपनको निबन्धगत शैलीले गर्दा नै हो । पाश्‍चात्य साहित्यमा भएको अत्याधुनिक गद्यको विविध प्रयोग अत्यन्त रुचिका साथ पढेर त्यसको पाचनसारलाई नेपाली साहित्यमा निबन्धको गहन विषयका रूपमा, सर्वथा नौलो ढाँचामा (शंकरकै शब्दमा भन्ने हो भने 'युनिक') र साधारण बोलीचालीका भाषामा ओकल्न सक्नु नै शंकरको आफ्नो विशेषता हो र जीवनको आत्मानुभूतिलाई आत्मसात् गर्दै निबन्धलाई आत्मकथाका रूपमा पेस गर्न सक्नु उनको दोस्रो ठूलो विशेषता हो।
यसरी आधुनिक नेपाली साहित्यमा नितान्त अलग ढाँचामा तथा सर्वथा नौलो शैली र सीपमा गद्य लेख्‍ने शंकरका साहित्यिक मान्यतासम्बन्धी उनका धारणाहरू उनकै शब्दमा यहाँ टिप्ने प्रयास गरिएको छ:
साहित्यिक मान्यताले नै मेरो काव्यगत मान्यतालाई अँगाले मारेको छ । हुन त मैले मेरो साहित्यिक जीवन प्रकाशित रूपमा गद्यबाट सुरु गरे पनि अरू अप्रकाशित शब्दहरूसँग खेल्न मैले कविताबाट नै सिकेँ।
नेपाली साहित्य ज्यादै कमजोर छ भन्ने चर्चा मित्रमण्डलीमा भयो एक पटक र मैले निश्‍चय गरेँ नै किन बलियो नबनाउने । त्यस्तै एक पटक निबन्धको कमी छ भन्ने चर्चा उठ्यो र म त्यतातिर लागेँ।
साहित्यले सेवा गर्नुपर्छ, जनभावना बनाउनुपर्छ र देशको उन्नति गर्नुपर्छ भन्ने नारा - यीउपर मेरो कहिल्यै पनि विश्‍वास हुन सकेन । तपाईँलाई थाहै छ, मेरो साहित्यिक जीवन प्रेमपत्रको लेखनीबाट सुरु भयो, प्रेमपत्र आफ्ना निमित्त लेखेँ, अर्काका निमित्त लेखेँ । आज पनि कुनै नयाँ लेख लेख्‍न एउटा अस्पष्ट अनुहार आँखाका सामु आइरहन्छ- म त्यसैका निमित्त लेख्दछु । त्यो अनुहार मजत्तिकै प्रबुद्ध, अझ मभन्दा बढी प्रबुद्ध हुन्छ र त्यो अनुहारले स्पष्टता लिन बाँकी नैछ । यसै सन्दर्भमा मलाई भन्ने दुस्साहस (?) हुन्छ, म जनताका लागि लेख्दिनँ, किनभने जनताको राजनीतिक अनुहार कमसेकम हुन्छ।
यो प्रश्‍न संसारमा अनेक रूपमा उठेको छ । तर मलाई लाग्दछ, धेरैजसो मानिसहरूले यौनसम्बन्धको गाम्भीर्यलाई बुझेकै छैनन् किनभने यौनमा 'स्वतन्त्रता' शब्द जोडिनुजस्तो मुर्ख्याइँ अरू केही छैन । यौनस्वतन्त्रता भन्नुको शाब्दिक अर्थ हुन जान्छ खुला रूपमा हस्तमैथुन । यौनको प्राप्ति, कमसेकम यौनको चरम सुखको प्राप्ति स्वतन्त्र रूपमा हुन सक्दैन । यसका लागि एक स्वयम् जत्तिकै बुझ्ने, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नसक्ने सहभागी आवश्यक हुन्छ र यी सम्पूर्ण प्रतिक्रियाहरू एक शुद्ध भावनामा लीन भएर गरिने कुरा हुन् । यिनमा न त स्वतन्त्रता छ, न त यिनको चर्चा त्यस सहभागीबाहेक अन्त सम्भव नै छ । साहित्यमा यौन तरकारीमा नुन हालेर स्वाद तिखारेको जस्तो स्वाद तिखार्न प्रयोग गरिने कुरा अर्कै हो, तर यौनमा साहित्यको प्रयोग जसले गरेको छ, त्यसलाई नै यसको मुख्य स्वाद थाहा हुन्छ।
नैतिकवादी म हैन, न त अनैतिकवादी नै हुँ । म त एक मनुष्य हुँ जसको सबभन्दा ठूलो गुण उसमा रहेको एकदुईओटा बैगुन नै हुन्छन् । ममा जे अवगुण रहेका छन् तिनका गुणहरूबाट मैले साहित्य सिर्जना गर्न सकेको हुँ र हिन्दीमा भन्ने हो भने जो भला सो भला, बस्!
म दर्शनलाई आफूले देखेको कुरा मान्दछु । सायद दर्शन शब्दको अर्थ पनि यही हो- दार्शनिक कुराहरू निश्‍चय पनि अर्काले देखेको र व्यक्त गरेको राम्रा कुरा हुन्, तर ती हाम्रा लागि व्यक्तिगत रूपमा शतप्रतिशत ठीक छन् भन्न सकिँदैन, किनभने ईश्‍वरलाई नमान्ने बुद्धलाई नै ईश्‍वर बनाइदिने परम्परा पनि मानवले नै अपनाएका छन् र दर्शनकै कुरा गर्ने हो भने मलाई सबभन्दा मन पर्ने दर्शन बौद्ध दर्शन हो, खास गरी यसको शून्यवाद!
शून्यवाद मेरा निमित्त अझ लक्ष्यवाद नै बनेको छ र मेरो लक्ष्यमा शून्य आइदियो भने छाक अड्कला भन्ने डर हुन्छ । अहिले त म शून्य र लक्ष्यका बीच रोप ट्रिक गरिरहेको छ र मैले स्वयम् आफ्नो दर्शन पैल्याउन सकेको छैन।
साहित्य जति मानिसको नजिक कुनै वस्तु छैन । धर्म, पाप, यौन, दर्शन आदि यी सब यथार्थ वा अयथार्थ रूपमा मानिसद्वारा नै आंशिक रूपमा परिचालन गरिने कुरा हुन् । साहित्य भने मानिस-समष्टि रूपको स्वच्छ प्रतिविम्ब हो । यसरी यी माथि भनेका सब कुरा साहित्यमा अंग हुन् तर साहित्य कसैको अंग हैन । आत्माको परिभाषा यदि मसँग चाहनुहुन्छ भने म एउटै शब्दमा परिभाषा दिन सक्छु- साहित्य।
ज्ति लेखिने साहित्य हुन् ती आधुनिक र जति लेखिसकिएका छन् ती प्राचीन, जति नपढिएका हुन् ती आधुनिक र जति पढिएका हुन् ती प्राचीन तर पनि प्रत्येक कृतिमा समयले आफ्नो पन्जाछाप छाडेकै हुन्छ । जस्तै अत्याधुनिक भनेर हामीले दाबा गरे पनि ती रचना गरिएका कालभन्दा बढी नवीन हुन सक्दैनन् । रहृयो शैलीको कुरा, शैलीले जबसम्म सामयिक बौद्धिकतालाई उत्प्रेरित गर्न सकदैन तबसम्म यस्ता कृति पढिँदा पनि पढिँदैनन्।
साहित्यमा केको गम्भीरता ? म स्वयम् जीवनलाई पनि मैले आजसम्म गम्भीर रूपमा लिएको छैन । बाबु र आमाको आनन्दबाट म जन्मेँ, कैयौँ कीटाणुको आनन्दबाट म मर्नेछु, यहाँ गम्भीरताको ठाउँ नै कहाँ छ र ? र फेरि साहित्यमा मैले गम्भीरता ओगटेँ भने मेरा साहित्य कसले पढिदेला?
१०. कथा र हाइकु शैलीको कविता
एक पटक नेपाली साहितयमा वैज्ञानिक कथा छैनन् भन्ने चर्चा उठ्यो र म त्यता लागेँ र एक पटक फेरि मेरा मित्र ईश्‍वर बरालले भने- नेपाली साहित्यमा भविष्यकालको व्याकरण ओगटी कुनै कथा लेखिएको छैन र मैले लेखिदिएँ- म भोलि जन्मनेछु, एक किसिमले हेर्‍यो भने नेपाली साहित्यको प्वाङ्ग प्वाल मात्रै म टाल्दै छु । कवितामा नयाँ मान्यता ल्याउनका निमित्त नै मैले जापानी हाइकु शैलीको प्रयोग गरेँ, किनभने नेपाली अस्पष्टमै रुमल्लिएको थियो र काव्यमा मेरो धारणाअनुसार अस्पष्टता हुनु हुँदैन।
हाइकु शैलीको एक मात्र ध्येय हो- ५/७/५ अक्षरका तीन पंक्तिमा एक चित्रभावना र एक अभिव्यक्ति । काइमा त्यसको स्फुरण चरमा बिन्दुमा यही नै मान्यता सर्वोपरि हुन जान्छ कि ? यसै निमित्त मैले हाइकुलाई प्रयोग गरेको हुँ । रहृयो काव्यमा या कवितामा बौद्धिक मान्यताहरू प्रदर्शन गर्ने आकांक्षा, त्यसका लागि गद्य नै प्रशस्त बलवान् र सजिलो छ भन्ने सोच्दछु।
(साहित्यिक अनुसन्धाता रेग्मी पछिल्लो समय पुराना पत्रपत्रिकामा छरिएर रहेका शंकर लामिछानेको कथासंग्रह तयार पार्न संकलन र सम्पादनमा जुटिरहेका छन्।)